हिजोसम्म राजतन्त्रविरुद्धका आवाज उठाइन्थ्यो, सबै बिकृतिको जरो त्यही हो भनिन्थ्यो । यही लहै लहैमा लागेर पार्टीजनदेखि सोझाहरुसम्मले के गरेनन्, ढुंगामूडा, गालीगलौज, बन्द हड्ताल सबै कर्म भए । अन्तत: ती दिनलाई विदेशी हस्तक्षेप र सहयोगमै मिल्काइयो । राजतन्त्रसमेत २०६५ जेठ १५ देखि समाप्त पारियो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटाइयो ।
अफसोस्, हिजो जे सप्तरंगी सपनाहरु देखाइएको थियो, ती सपना सपना नै रहेछन् । पर्दा खुल्यो, शान्ति, अमनचैन, विधिको शासन, न्याय, विकास, समृद्धि, सुशासन सबै भ्रमको खेतीरहेछ । कोही तलबाट टुक्य्राउने, कोही माथिबाट हिस्सा खोज्ने, एक नेपालीलाई अनेकतामा बिभाजन गर्ने, जातीय, भाषीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक विषवृक्ष यतिबेला हलक्कै हलिकएको छ ।
हिजो एकताको जुन सूत्र थियो, त्यो चुँडालियो, हामी बिस्तारै बिभाजन र बिखण्डनतिर लागेका छौं ।
नयाँ नेपाल बनाउनेहरुले सिंगो नेपाललाई सिध्याउन थालेका छन् । जे जे वाचा गरेका थिए, उलटो काममात्र गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधान ठूला दलका लागिमात्र रहेछ, आमनागरिक अहिले झन झन अन्यायवोध गरिरहेका छन् । स्पष्ट शव्दमा भन्ने हो भने संविधानले ढुंगामूढा गर्नेलाई मात्र स्वर्ग दियो, आमजनता नर्क भोग्न बाध्य छन् । तिनको जीवन नर्कमय छ ।
जनआन्दोलनका बेलामा के के मुद्दा उठाइउको थियो, केही पूरा भएनन् । सोझा जनतालाई जे जे आश्वासन दिइएको थियो, केही पनि पूरा गरिएनन् । आज सीके राउतदेखि लिम्बुवान, खम्बुवानसम्मले बिखण्डनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । संविधान यतिसम्मको बिभेदकारी छ कि सबैलाई समेट्ने भन्ने संविधानको उद्देश्य नै छैन । यो मुलुकमा केही गणतन्त्रवादी होलान्, त्यसबाहेककाले कुनै स्थान पाउनुपर्छ, तिनको कुरा सुनवाई हुने र फरक विचारको सम्मान गर्ने संविधानले सोचेकै छैन । संविधान जारीकर्ता ठूला दलका लागि यो संविधान तिनले पाएको मौजा हो । यसकारण यो मुलुक अभिभावकविहीन बन्नपुगेको छ ।
यही मौका छोपेर देश टुक्य्राउने माँग उठेको छ, आन्दोलन चर्केको छ । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभाका सदस्यहरु सबै बैधानिक रुपमै एकपछि अर्को गर्दै अन्तत:: मुलुकलाई खण्डित गर्न लागिपरेका छन् । उता सीके राउत समूह त खुलेआम स्वतन्त्र मधेश, अलग देशको नारा लगाएर सडक मार्च गर्न सक्षम भएको छ । कहाँ छ सार्वभौम मुलुक संरक्षण गर्ने संविधान ?
मधेशका संवैधानिक मधेशी दल र सीके राउतहरु एक भएर यो देश टुक्य्राउँछन्, नागरिकता विधेयक यही उद्देश्यको अर्को सशक्त कडी हो ।
सुनियो, सरकारले बिद्रोहीहरुसँग वार्ता गर्न टोली बनाएछ । नेपाली हुँ भन्नेसँग वार्ता हुनसक्छ, नेपालको एक भागलाई अलग देश बनाउँछु भन्नेसँग वार्ता किन ? संविधानले त्यो छुट सरकारलाई दिएको छ र ? पहिले नेपाली हुँ भन्नुपर्‍यो, अनि नेपालीले संवैधानिक अधिकार माग गर्नसक्छ । नेपाली नै होइन भन्नेलाई कुन अधिकार दिन वार्ताको नाटक हो ? कतै यो सरकार भारतको निर्देशनमा वार्ता गरिरहेको त छैन ? हो भने संविधानभन्दा माथि भारत हो कि के हो ?
सीके राउतले सिरहाको अज्ञात ठाउँमा युवाहरुलाई सशस्त्र तालिम दिदैछ । यसको भीडियो रेकर्ड गृह मन्त्रालय पुगेपछि सरकारले टास्क फोर्स गठन गरेछ । टास्क फोर्सको काम हो कि सेनाको ? सेनालाई न सीमामा खटाइन्छ, न नेपालविरुद्धका साजिसविरुद्ध ? आखिर सेनालाई किन साँघुराएर राखेको ?
अचम्म, कात्तिक १०गते सरकारले चियापान कार्यक्रम राख्यो र त्यसमा सीके राउतलाई पनि निम्तो दिइएछ । गृह कारवाहीका लागि टासक फोर्स गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री चियापानमा निम्तो दिने ? सरकार यो मुलुकप्रति जिम्मेवार त छ ?
सीके राउत पटक पटक पक्राउ पर्नु, छुट्नुले त्यसै पनि शंका थियो, त्यसमाथि संविधान दिवसका दिन मधेश अलग देश भनेर प्रदर्शन गर्दा सरकारले पक्राउ नै गरेन, नियन्त्रण नै गरेन । जब सीके राउत गए अनि सरकार हर्कतमा आएको हो । अब वार्ता, चियापान र कारवाहीका लागि टासक फोर्स । नाटकै नाटक भइरहेको छ । समस्या राजनीतिक हो कि आपराधिक, समस्या संवैधानिक हो कि अरु नै ? सरकारले छुट्याउन सकेको छैन । अपराधिक हो भने वार्ताको कुरा किन ? देशघातकसँग वार्ता गरेर समाधान निस्केला ?
सीके राउतका के माँग छन् र पूरा गर्ने ? उसले सिधै मधेश देश भनिरहेको छ । यस्ता बिखण्डनवादीसँग वार्ता गरेर ओली सरकारले समाधान निकाल्यो भने त्यो चमत्कारमात्र हुनेछ । सर्वसाधारणलाई राष्ट्रविरोधी देख्ने, जो राष्ट्रघाती छन्, उनीहरुसँग घाँटी जोड्ने सरकारको नियत खराव देखिन्छ । नियत नै खराव भएको नेताले शान्ति र स्थिरता कसरी दिनसक्छ ?